Isamsung ijoyina iTrend kwaye ibhengeza iGlassy Black Galaxy S7 kwiintsuku ezizayo Iindaba zeGajethi
Isamsung iyaqhubeka nokubheja ngokungagungqiyo kwi-Galaxy S7 yayo kwaye ngokungafaniyo neminye iminyaka iyaqhubeka nokusungula iinguqulelo ezahlukeneyo zeflegi yayo, nangona isinika imibala eyahlukeneyo ye-smartphone yayo eyaziwayo. Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo siyibonile indlelaI-Galaxy S7 kumda ngombala ohlaza okwesibhakabhaka, ngokungathandabuzekiyo esiwuthandileyo, kwaye obonakala ugqibelele ngeli xesha leKrisimesi.
Ngoku inkampani yaseMzantsi Korea ibonakala ifuna ukujoyina ifashoni eqalwe yiApple ngombala umnyama okhazimlayo, kwaye Kwiintsuku ezizayo sinokubona ukuba iGalaxy S7 ibhengezwe njani kulo mbala wahlukileyo kunye nowaziwayo. Ewe kunjalo, okwangoku iindaba azikho semthethweni, kwaye ngekhe zenzeke nakweyiphi na imeko kude kube ziintsuku zokuqala zikaDisemba.
Ngelishwa, sakuba siqinisekisile ukuba olu hlobo luza kubhengezwa kwiintsuku ezimbalwa ezizayo, Umbuzo usahleli ukusonjululwa malunga nokuba le Galaxy S7 emnyama ecwebezelayo iya kufikelela kuzo zonke iimarike okanye iya kuhlala, njengoko kuhlala kunjalo, eMzantsi Korea.
I-Apple okwangoku iyaqhubeka nokuthengisa iinguqulelo ezahlukileyo ze-iPhone 7 ngombala omnyama ocwebezelayo ngesantya esimangazayo kwaye nangona inkampani yaseCupertino uqobo iqinisekisile ukuba inokuphela isiba mbi ngenxa yendlela isixhobo esenziwe ngayo, Oku kubaluleke kakhulu kubasebenzisi abaye bakhohliswa kakhulu ngumbala we-iPhone entsha.
Ngaba ungayithanda i-Galaxy S7 emnyama emnyama ukuba ifumaneke kwihlabathi liphela ukuze ikwazi ukuyifumana ngaphandle kwengxaki?.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » Isamsung ijoyina iTrend kwaye yazisa iGlossy Black Galaxy S7 kwiintsuku ezizayo
I-HTC isungula i-evo ye-10, uguqulelo lwehlabathi lweHTC Bolt